Huawei P40 यसको पूर्ववर्ती P30 भन्दा सस्तो सुरू गर्न सकिन्छ Androidsis
Huawei P40 P30 भन्दा सस्तो हुन सक्छ
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | हाम्रो बारेमा
यदि तपाईंले हेडलाईन पढ्नु भएको छ भने तपाईं हामी जस्तै आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ जतिखेर हामीले Huawei को मनसाय थाहा पाएका छौं। अर्कोमा चिनियाँ फर्म राजीनामा छैन कि धेरै स्पष्ट उदाहरण र उनी घाटीको फेदमा निरन्तरता दिन कटिबद्ध छिन्, यस्तो लाग्छ कि उनले लिएकी छिन् क्षेत्र मा एक अभूतपूर्व निर्णय। विनाशकारी वर्ष पछि २०२० ग्रिलमा सबै मासु राखेर सुरु हुन्छ।
Huawei साझा चलनबाट टाढा जान्छ जुन सबै निर्माताहरूले पालन गर्छन् र जसमा हामी पूर्ण रूपमा अभ्यस्त छौं। हामी केहि सामान्यलाई विचार गर्छौं जुन एक बर्षदेखि अर्कोमा, नयाँ स्मार्टफोनको प्रक्षेपणको साथ मूल्यहरू सँधै बढ्छ। त्यहाँ यस्तो फर्महरू छन् जसले यसलाई "नरम" तरीकाले गर्छ, र त्यहाँ अरूहरू छन् जुन उनीहरूको मूल्यहरू हरेक वर्ष पर्याप्त मूल्य बढाउँछन् हालको मूल्यहरू पुग्न नसक्दा कि धेरैका लागि असम्भव छ।
Huawei P40 लाइन मूल्यहरु तोड्नेछ
Huawei कि निर्णय गरेको छ बजारमा यसको नयाँ मोडेलको समावेशको साथ, यसले यसको अघिल्लो मोडेलहरूको तुलनामा कम हुनेछ।। एक साँचो मील का पत्थर जसमा हामी हर्षित हुनेछौं कि बाँकी निर्माताहरू सामेल हुन चाहन्छन्। सम्भावित स्पष्टीकरण मध्ये एक कि हामी यस निर्णयको भावना बनाउन को लागी पाउन सक्छौं Huawei र अमेरिकी सरकार बीचको विवादबाट आउँछ। यद्यपि यो समाधानको प्रक्रियामा विवादास्पद हो, यो सम्भावना भन्दा बढी छ la Huawei P40 परिवार गुगल सेवाहरू बिना जन्म.
नियमित एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको रूपमा के तपाई आफ्नो स्मार्टफोन चलाउनका लागि गुगल सेवाहरू एकदम आवश्यक वा आवश्यक देख्नुहुन्छ? हामी यो आधारबाट शुरू गर्दछौं कि गुगलले हाम्रो लागि अनुप्रयोगहरूको पूर्ण प्याकेजको साथ कारखानामा स्थापना भएको चीजहरू धेरै सजिलो बनाउँदछ। र यदि हामी "गुगलकृत" छौं भने हामीलाई उनीहरूका सेवाहरू र अनुप्रयोगहरू छोड्न गाह्रो हुन्छ। तर हामीले यो पनि भन्नु पर्छ गुगल बाहिर जीवन छ र यो प्रमाणित छ कि हामीसँग कुनै पनि समयमा गुगल प्रयोग नगरी १००% कार्यात्मक स्मार्टफोन हुन सक्छ।
धन्यवाद एक HarmonyOS अधिकतम र अनुकूलन Huawei टर्मिनल को लागी अनुकूलित अनुभवले हामीलाई Google लाई कम र कम गर्न सम्झाउँदछ। विशेष गरी त्यो जानेर Huawei P40 को सुरूवात मूल्य 599 XNUMXeयुरो हुन सक्छ। हामी कुरा गर्छौं नयाँ मोडेलको मूल्य घटाउने २०० युरो अघिल्लोको तुलनामा, एक अन्तिम! यदि तपाईं Huawei मनपराउनु हुन्छ र गुगल बिना अनुभव बाँच्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं अपेक्षित भन्दा धेरै कम मूल्यमा दायराको प्रामाणिक शीर्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि मिल्छ Huawei भविष्यमा यसको द्वन्द्व सुल्झाउने सम्भावना छ र नयाँ P40 मोडेलहरूमा तपाईं Google मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » Huawei P40 P30 भन्दा सस्तो हुन सक्छ
शाओमीले रेडमी के २० प्रीमियमको मूल्य घटाउँदछ
TCL Plex ले एन्ड्रोइड १० अपडेट प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ